Vagadziri izvozvi vane beta 1 yewatchOS 4.3 inowanikwa | Ndinobva mac
Uye yaive yega beta vhezheni yanga ichishaikwa kupedzisa akasiyana maApple software, mune iyi kesi watchOS 1 beta 4.3 yakavaka 15T5165e uye musimboti hatina ruzivo rwakanyanya rwezvinhu zvitsva zvainoshandisa. Chii chiri chechokwadi ndechekuti kugadzirisa kunowedzerwa mukugadzikana kwesisitimu, kusimudzira kuchengetedzeka kwayo.
Chaizvoizvo kuvandudzwa kunoitwa mune idzi betas dzekutanga kwakasarudzika kupfuura kwekuvandudzwa kwezvinhu zvakanangana nehunyoro. Zvinogoneka kuti nekufamba kwemaawa nekuwedzera kukura, vanozozviedza tanga kutsvaga kugadzirisa uye nhau.
Uye ndezvekuti muIOS uye macOS uye tvOS takaona dzimwe nyaya dzakakosha nekuvandudzwa kwakasiyana kuchiri kuwanikwa senge podcast yekushandisa kana kodhi inoreva nyowani iPad Pro ine Chiso ID. Muchidimbu, isu tinofanirwa kumirira kuti vagadziri vatange kuongorora iyi beta vhezheni sezvavakaita nemamwe mavhezheni akaburitswa nezuro masikati.
Iyo beta vhezheni yevagadziri inogara iri nani kutarisa kubva kure uye mune iyo Apple Watch, zvimwe. Uye ndiko kuisa imwe yeiyi beta vhezheni paApple smart wachi zvinoreva kusakwanisa kuenda pasi kune vhezheni yapfuura uye kana paita dambudziko zvinofanirwa kuomerera nazvo kusvika pa beta inotevera. Iyo Apple Watch haibvumire kudzikisira, saka chakanakisa chinhu verenga nhau idzo vagadziri vanotipa nezvenhau uye mirira iyo yekupedzisira vhezheni kune wese munhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Vagadziri ikozvino vane watchOS 1 beta 4.3 inowanikwa